YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 01
စိတ်ကြွဆေးပြား အလုံးရေ ငါးသိန်းနဲ့အတူ ဖမ်းမိတဲ့ တရားခံ Tin Min Chuan ကိုတရုတ်ကို ပြန်လွှဲပေး
မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်ကို တရုတ်အစိုးရက သေဒဏ်ပေးလိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတည်မှုကို ဂရုမစိုက်ကြောင်း နမူနာပြလိုက်တာပါ။ ပိုဆိုးတာက မူးယစ်ဆေးဝါးမှုကြောင့် သေဒဏ်ပေးတာမဟုတ်ပဲ တရုတ်လူမျိုးတွေကို သတ်တယ်လို့ သံသယရှိမှုနဲ့ သေဒဏ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒါက တရုတ်လူမျိုးကို ထိပါးရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ သတိပေးလိုက်တာပါ။ မြန်မာပြည်အစိုးရကတော့ စကားနည်းရန်ဆဲဆိုတဲ့မူကိုပဲ လက်ကိုင်ထားတာလား၊ ကြောက်လို့ပဲ နှုတ်ခွန်းမတုန့်ပြန်ရဲတာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ စိုင်းနော်ခမ်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒီနေ့အထိ လေသံတစ်ချက်မဟခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ နယ်ချဲ့နေတဲ့ တရုတ်မူးယစ်ရာဇာလေးတွေကို အစိုးရက မဖမ်းရဲလို့ ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားရတာတွေရှိပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရက အလိုရှိရင်တော့ အူးယားဖားယားဖမ်းပြီး လွှဲပေးရတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးလာဖြန့်လို့ ဖမ်းမိရင်တောင် တရုတ်လူမျိုးကို မြန်မာပြည်မှာ တရားမစီရင်ရဲလို့ တရုတ်ပြည်ကိုပဲ လွှဲပေးရတယ်။
မြန်မာမူးယစ်ရာဇာတစ်ယောက်ကို မြန်မာပြည်တရားဥပဒေက အပြစ်ပေးတာဆိုရင် ဘာမှကို ပြောစရာမရှိပါဘူး။ စိုင်းနော်ခမ်းက ဆိုးတယ်ပဲထားဦး။ ကိုယ့်သားသမီးဆိုးတာကို အကြောင်းပြုပြီး တခြားသူက သတ်ဖြတ်နေတာကို မျက်နှာလွဲရက်တယ်ဆိုရင် ဒီအစိုးရက မိဘမပီသဘူးပဲ။
(ဓာတ်ပုံက စိတ်ကြွဆေးပြား အလုံးရေ ငါးသိန်းနဲ့အတူ ဖမ်းမိတဲ့ တရားခံ Tin Min Chuan ကို မြန်မာပြည်မှာ တရားမစီရင်ရဲလို့ တရုတ်ကို ပြန်လွှဲပေးနေတဲ့ပုံပါ)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/01/20130အကြံပြုခြင်း
‎*** အရေးကြီးပါသည် အမြန် Share ပေးပါ..နီးစပ်ရာ တိုင်းဒေသ မြို့ နယ်များကို အကြောင်းကြားပေးကြပါဗျာ...Message Box မှဝင်လာသော သတင်းပါ....***
... ... ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ရက်စွဲ - ၂၀၁၃ခုနှစ်၊မတ်လ(၁)ရက်နေ့
အမည် - မဇာဇာသိမ့်
အသက် - (၂၈)နှစ် ( ၁၉၈၅ - ၄ - ၂၄ ) နေ့
... အမိအဖအမည် - ဦးဝင်းနိုင်+ဒေါ်စန်းမြင့်
မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၂/ဒလန(နိုင်)၀၅၃၄၈၈
အိမ်မှထွက်ခွာသည့်နေ့ - (၂၇ - ၂ - ၂၀၁၃ )နံနက်စောစော
တွေ့ရှိပါကဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၃၂၃၃၆၆၄
၀၉ - ၄၂၀၁၁၅၃၅၂
၀၉ - ၄၂၀၂၁၁၁၂၅
ရောက်ချင်းငွေမပို့နိုင်ရင်စိတ်မပူနဲ့နော်။ဘတ်အရင်လုပ်ရမှာမို့လို့ TV တွေကိုအကြီးကောင်ကိုအကြွေးနဲ့ရောင်းလိုက်ပါ။သားကျောင်းတက်ချိန်ရရင်ဖြစ်တယ်။သားကျောင်းတက်မှအတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာကျူရှင်တက်
ကျွန်တော်သမီးရေးထားခဲ့သောစာအရမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ၁၉၉ သို့ (၂၇ - ၂ - ၂၀၁၃) ညပိုင်းတွင်စုံစမ်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉ တာဝန်ခံမှ
ှမြ၀တီခရိုင်ရဲအထူးတပ်ဖွဲ့ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၈ - ၅၀၁၂၉
ကော့သောင်းခရိုင်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၉ - ၅၁၉၈၁ တို့ဆက်သွယ်ရန်ပြန်ကြားပါသည်။ထိုပြန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆက်သွယ်ရာမြ၀တီ
အချက်အလက်များဦးအောင်မြင့်ထွန်းထံ G -Mail ဖြင့် ပြည့်စုံစွာတင်ပြခဲ့ပါသည်။ဦးအောင်မြင့်ထွန်းမှကူညီပေးမည်ဟုပြန်ကြား
ပါသည်။(၂၈ - ၂ - ၂၀၁၃)နေ့ညနေ၆နာရီအချိန်တွင်မဇာဇာသိမ့်
နှစ်ယောက်ကျန်နေ၍ (၂ - ၃ -၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
(၂၈ - ၂ -၂၀၁၃)နေ့ည၈နာရီခန့်တွင်နေပြည်တော်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်
ယူလာသောမိန်းကလေး(၁၀)ယောက်အား(၂ - ၃ - ၂၀၁၃)နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှအမျိုးသမီးပွဲစားမှလာရောက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့မည်ဆိုပါက
သို့ဖြစ်ပါ၍(၂ - ၃ - ၂၀၁၃)နေ့တွင်၎င်းမိန်းကလေး(၁၀)ယောက်ထိုင်းနိုင်ငံ
တောင်အာဖရိက သင်ခန်းစာယူရန် ဒတ်စမွန်တူးတူး ပြောကြား
နေသွင် DVB မတ် ၁ ရက်၊ ၂၀၁၂
တောင်အာဖရိကရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကနေ သင်ခန်းစာယူဖို့ မြန်မာပြည်ကို ရောက်နေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စမွန်တူတူးက ဒီနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်ကို ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်ကုန်းမှာရှိတဲ့ နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံတဲ့အချိ်န်မှာ အခုလို ပြောလိုက်တာပါ။
တောင်အာဖရိကရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဘုန်းတော်ကြီးက ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ အခုလို မိန့်ကြားပါတယ်။
“တောင်အာဖရိက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ နိုင်ငံရေးအမြင်မတူသူတွေ အတူတကွ အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ရေးဆွဲထားတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်မှာ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်။ လူမျိုး၊ ကျားမနဲ့ အသက်အရွယ်အပေါ် အခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ မသန်စွမ်းသူတွေအပေါ် ခွဲခြား ဆက်ဆံတာ၊ သေဒဏ်ပေးတာကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ တားဆီးထားတယ်” လို့ ဘုန်းတော်ကြီးက မိန့်ကြားသွားတာပါ။
ဒါပေမယ့် တောင်အာဖရိကမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အမျိုးသမီးအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု၊ ဒုစရိုက်မှုတွေ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့လို ပြဿနာတွေနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု ကိစ္စတွေက ဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဘုန်းတော်ကြီးက ၀န်ခံပါတယ်။
ဒါကြောင့် လွတ်မြောက်ရေးခရီးဟာ ဘယ်တော့မှ ဆုံးတယ်လို့ မရှိနိုင်လို့ အမြဲတမ်း သတိနဲ့ နိုးကြားနေဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဦးဝင်းတင်ကလည်း မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ တိုးတက်လာတယ် ဆိုပေမယ့် အခုအချိန်အထိ မလွတ်မြောက်သေးတဲ့အကြောင်း လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကလည်း ကြာဦးမယ်လို့ ပြန်လည် ဆွေးနွေးပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာနဲ့ ပြည်ထောင်စုကိစ္စတွေ အားလုံးမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက အဓိက အဟန့်အတား ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း ပြန်လည် ဆွေးနွေးပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် လူထုရဲ့ယုံကြည် ထောက်ခံမှုကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပေမယ့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာကြားမှာ နံရံတခုကို ကာဆီးထားတယ်လို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်နိုင်ရင် အန်အယ်လ်ဒီက ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပေမယ့် အာဏာမရနိုင်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း သမ္မတ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားတဲ့ ပြည်ထောင်စုပုံစံ တည်ဆောက်ရေး အတွက်လည်း အဟန့်အတား ဖြစ်နေတယ်လို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
တောင်အာဖရိကဆီကနေ မြန်မာပြည်အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး သင်ခန်းစာက ဘာဖြစ်မလဲလို့ ဘုန်းတော်ကြီး တူးတူးကို ဒီဗွီဘီက မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ “လွတ်လပ်ရေးဟာ ဖိနှိပ်ခြင်းထက် အကုန်အကျ သက်သာတယ် (freedom is cheaper than oppression)” လို့ ဘုန်းတော်ကြီးက ဒဿနဆန်ဆန် ဖြေပါတယ်။
၄၅ မိနစ်ကြာတွေ့ဆုံတဲ့ အခါမှာ ဒက်စမွန်တူးတူးက ဦးဝင်းတင်ရဲ့သတ္တိနဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ လွတ်မြောက်ရေးအပေါ် မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ အနစ်နာခံ ပေးဆပ်မှုတွေအပေါ် လေးစားတဲ့ အကြောင်း ထပ်တလဲလဲပြောသွားပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/01/2013 1 အကြံပြုခြင်း
နေပြည်တော်၊လယ်ဝေးမြို့နယ်၊မဲဟော်သစ်တောကြိုးဝိုင်း၊ပင်သောင်ကျေးရွာ၊သရက်ချောင်းကျေးရွာအနီး၊ရေချင်စမ်းကျောင်ထုတ်ကွင်းအနီး၊သစ်တောမြေများတွင်၊16.2.2013.နေ့က ဘင်္ဂါလီကုလားများရောက်လာပြီး၊ ရွာသူ/ရွာသားများ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသော မြေယာများကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေမှုအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အရေးယူပေးရန်တိုင်သောအခါ လုပ်ပေးမည် ဟုသာပြောပြီး ရက်ပေါင်းများစွာကြာသည်အထိ အရေးမယူသောကြောင့် နေပြည်တော်သို့ တိုင်ထားသည်ဟုသိရသည်။
Equation Mg Mg
KIA နှင့် အစိုးရတို့၏ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး အခြေအနေဆိုးရွားနေ
ရွှေဟသာင်္ သတင်းဌာန၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA စခန်းအား အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များက ဖေဖော်ဝါရီလ ကုန်ပိုင်းအထိ ဆက်လက် တိုက်ခိုက်လျက် ရှိနေသဖြင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် အခြေအနေ ဆိုးရွား နေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု KIA တပ်မှူး တဦးက ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာနအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ ဖားကန့်နှင့် လိုင်ဇာ တဝိုက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေ မရှိပေမဲ့ တခြား တပ်မဟာ ဒေသတွေမှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေဆဲပါ။ မနေ့ကဆို တပ်မဟာ (၁) တပ်ရင်း (၁၀) ဘက်မှာ မိနစ်ပိုင်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် လော့ခေါင်ဖက်မှာ စစ်ဆင်နေတယ်လို့ KIA တပ်မှူး တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
ဤစစ်ဆင်ရေးတွင် ခလရ တပ်များ အပါဝင် နယ်ခြား စောင့်တပ်များနှင့် ပြည်သူ့စစ်များ စုစုပေါင်း အင်အား (၇၀၀) ခန့် ရှိသော အစိုးရ တပ်များသည် လော့ခေါင်တောင်ကုန်းတွင် နေရာ ယူထားသည့် KIA တပ်ဖွဲ့တို့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီကျော်၌ စတင်ပြီး ထိုးစစ်ဆင် နေသည်ဟု KIA တပ်မှူးက ဆိုပါသည်။
ဤကဲ့သို့ စစ်ဆင်နိုင်ရန် အစိုးရ တပ်များသည် ဖေဖော်ဝါရီ လဆန်း ကတည်းက ကချင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ (၁)၊ တပ်ရင်း (၁) နေရာဖြစ်သည့် မေခမြစ် အရှေ့ဘက် ချီဖွေလော့ခေါင် ဒေသရှိ ၄င်းတို့ တပ်ဖွဲ့များ ထံသို့ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုကာ စစ်လက်နက် ရိက္ခာများ ဖြည့်တင်း ထားခဲ့ပါသည်။ တချိန်ထဲတွင် ဒေသခံများအား ပေါ် တာဆွဲပြီး ၄င်းတို့၏ ရှေ့တန်းစခန်းများ သို့လည်း ပို့ဆောင် စေခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖေါ်ဝါရီ လဆန်း ပိုင်း၌လည်း အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် (၆၀) မမ လက်နက်ကြီး များဖြင့် လော့ခေါင်ခရိုင် မှော်ဂျော် ကျေးရွာထဲသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် ၄င်းကျေးရွာမှ ရွာသား ၁၀၀ ခန့်သည် ဘေးလွတ်ရာသို့ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်ပြေး ခဲ့ရကြောင်း ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရ ခလရ ၂၆၀၊ တပ်ဖွဲ့အပါဝင် ဦးစခုန်ဒိန်ယင်း BGF ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေး တပ်ဖွဲ့တို့နှင့် KIA တပ်မဟာ (၁)၊ တပ်ရင်း (၁၀) တပ်ဖွဲ့တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် (၂) ကြိမ်တိုင် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။
အလားတူ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့ တွင်လည်း အစိုးရ ခလရ ၂၉၊ ခမရ ၂၆၀နှင့် BGF ၁၀၀၂ ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့နှင့် ပင် နံက် ၁၀း၅၅ အချိန်မှ ညနေ ၃း၃၀ နာရီ အထိ KIA တပ်မဟာ (၁) တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အစိုးရ တပ်များ စစ်ဆင် နေသော်လည်း KIA သည် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် သွေးစည်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် အကြို ညှိနှိုင်းပွဲ တစ်ခု ကျင်းပရန် ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးမှု ပြေလည်ရေးကို ရှေ့ရှုသော အားဖြင့် KIA သည် ထိုကာလ၌ အစိုးရ တပ်များနှင့် ပစ်ခတ်မှုများ မဖြစ်ပွားရန် တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားကြရန် ၄င်းတပ်ဖွဲ့များအား ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။
တချိန်ထဲတွင် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် KIA စစ်ဆင်ရေး အတွက် စစ်ပြင်ဆင်မှုများ ဆက်တိုက် လုပ်လာခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖ၀ါရီလ ၁၉ ရက်တွင် ရှမ်းပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေထဲသို့ အစိုးရတပ်များ အင်အား တိုးချဲ့လာကြောင်း ဒေသခံများက ပြောပါသည်။
ထို့အပြင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝး၃ဝ နာရီတွင်လည်း ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း နမ်းခမ်းဒေသတွင် အခြေစုိုက်သည့် ခမရ ၅၆၈ သည် မန်းဝင်း ကျေးရွာဘက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကေအိုင်အေ တပ်များ လှုပ်ရှားနေတည့် လဂတ်ဘော် ကျေးရွာ ဖက်သို့ ဦးတည် လာနေကြောင်း KIA ဘက်က ဆိုပါသည်။
တချိန်ထဲတွင် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ခရိုင်ရှိ ဝါဝင်းနှင့် ကွမ်ဘန့် ၊ ဘူးဂါးရုံးကျေးရွာ ဖက်၌ တပ်စွဲထားတည့် တပ်မ ၉၉ လက်အောက်ခံ ခလရ ၇၉ သည် အင်အား အမြောက်အများ ပြန်လည် ဖြည့်တင်းကာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ မှစတင်ပြီး ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၁၅ လှုပ်ရှားရာ ဒေသ၌ လှုပ်ရှား လာခဲ့ကြောင်း KIA ဖက်မှ ဆိုပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့နံနက် ၈ နာရီ အချိန်တွင် ရှမ်းပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း KIA, တပ်မဟာ (၄)ဒေသ၊ တပ်ရင်း (၃၆) နယ်မြေဖြစ်သော ပန်ဆိုင်းမြို့နယ် ခလဲန်ကျေးရွာ အနီးတွင် KIA ပြည်သူ့စစ် MHH တပ်ခွဲ (၅) တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ တို့ မိနစ်ပိုင်းမျှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။
ဤပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်လည်း အင်အား (၂၀၀) ခန့်ရှိသည့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ ခလရ ၆၉၊ ခမရ ၂၄၂ တို့က KIA MHH ပြည်သူစစ် တပ်ခွဲ (၅) တပ်စခန်းကို နံနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် ရုတ်တရက် ဝင်ရောက်လာပြီး လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ နာရီဝက်ကြားတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု တပ်ခွဲ (၅) အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ထို့အတူ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် တပ်မဟာ (၅)ဧရိယာရှိ KIA ဗဟိုဌာနချုပ် နယ်မြေထဲသို့ ကားအစင်း ၃၀ ဖြင့် နံနက် ၉ နာရီခွဲ ချိန်တွင် လဂျားယန် အနီးရှိ မန်ဆိုင်းကျေးရွာတွင် ထပ်မံ တိုးချဲ့ ချထားကြောင်း ရှေ့တန်းရှိ KIA အရာရှိ များက ဆိုပါသည်။
၎င်းတပ်ဖွဲ့များသည် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ဘက်မှ လုံခြုံရေး ယူနေသော တပ်မ (၇၇) တပ်ဖွဲ့များ ဖြစ်ပြီး အင်အား ၄၀၀ ကျော်ခန့် ရှိနိုင်ကြောင်း KIA မှ ခန့်မှန်း ပြောဆိုပါသည်။
ဤသို့ကြောင့် အစိုးရ တပ်များ၏ စစ်ဆင်ရေး လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် KIA နှင့် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖေါ်ဝါရီ (၄) ရက်နေ့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ ဆွေးနွေးပွဲမှ ရယူခဲ့သော စစ်ပြေငြိမ်းရေး နားလည်မှုသည်၊ ထိရောက်မှု မရှိကြောင်း စစ်ရေး အကဲခတ်များက ယူဆ နေကြပါသည်။
အစိုးရသည် KIA နှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ အမြန် ကျင်းပရန် လိုလားနေပါသည်။ ဤသို့ အမြန်ဖြစ်လာရန် စစ်ရေးနှင့် ဖိအား ပေးနေဆဲဟု KIA ဖက်က ယူဆဖွယ် ရှိပါသည်။ KIA ကမူ အစိုးရ၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ဖိအားကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲရက်များ ရွှေ့ ဆိုင်းနေသည့် အလားအလာ ဖြစ်နေပါကြောင်း အကဲခတ်များက သုံးသပ် ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံသား တစ်ဦး ဖြစ်သည့် နော်ခမ်း ကို အကာအကွယ် ပေး ရန် မြန်မာ အစိုးရ ပျက်ကွက်
r Freedom News Group(Burma)'s photo.
မြန်မာနိုင်ငံ သား ရှမ်းပြည်နယ် ဇာတိ နော်ခမ်း အား ယနေ့နေ လည် ၃နာရီ က တရုတ် အစိုးရ က ကွပ် မျက် လိုက် ပြီ ဖြစ်သည်။ ပုံ တွင် နော်ခမ်း အား ဆေးထိုး ကွပ်မျက် ခြင်း မပြု ခင် အလို မိနစ် အနည်း ငယ် တွင် နောက်ဆုံး တွေ့ ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ခဲ့သည်။ နော် ခမ်း အား သေဒဏ် ပေး ကွပ် မျက် သည် ကို တရုတ် အစိုးရ
မေခမြစ်ဒေသမှာ KIOနဲ့ အစိုးရတပ်တွေ တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါး
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မေခမြစ်ဒေသ ဆော့လော် လော့ခေါင်ဒေသမှာ ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရတပ်တွေ မနေ့ကအထိ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးနေပါတယ်။
အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ ဦးစခုံတိန့်ယိမ်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကလည်း အစိုးရတပ်တွေဘက်က ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို ဗဟိုဒေသ၊ တပ်မဟာ ၄၊ တပ်မဟာ၃နဲ့ တပ်မဟာ၂ ဒေသတွေမှာ အခုတလော တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ပေမယ့် မေခမြစ်အရှေ့ဖက်ခြမ်း လောခေါင်နဲ့ ဆော့လော်ကြားက တောင်ကြောတွေမှာ မနေ့ကအထိ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွါးနေတဲ့အကြောင်း ကေအိုင်အို စစ်မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးဌာနမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးဇော်တောင်က RFA ကို ခုလို ပြောပြပါတယ်။
“မနေ့ကတော့ သူတို့ဒေသအခေါ် စုစည်းလို့ခေါ်တဲ့ ရွာရှိတယ်၊ အခုတော့ လူမရှိတော့ဘူးပေါ့၊ အဲဒီရွာရဲ့အပေါ်ကုန်း တောင်ကြောတလျှောက်မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်၊ တချို့နေရာတွေကတော့ ကျနော်တို့ ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာတွေရှိတယ်၊ တချို့နေရာကျတော့ ကျနော်တို့တပ်တွေ နေရာပြန်ယူထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်၊ အဲ့ဒီတောင်ကြောတလျှောက်မှာပဲ မြစ်ကြီးနားက ၂၉ ရယ်၊ ၂၆၀ရယ်၊ ၇၄ ရယ်၊ ပြီးတော့ ဘီဂျီအက်ဖ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေလဲပါတယ်၊ မနေ့ကပဲ ကျနော်တို့ရတဲ့သတင်းအရ ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းကြောမှာရှိနေတဲ့ တပ်မ ၃၃ က အဖွဲ့တွေလဲ အဲဒီဘက်ကို ပြန်ပြီးမှ အင်အားထပ်ဖြည့်နေတယ်လို့ ကြားတယ်”
အဲဒီဒေသမှာ ကေအိုင်အို တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၁၀ နဲ့ မြစ်ကြီးနား ကျွန်းပင်သာအခြေစိုက် ခလရ ၂၉၊ မိုးကောင်းအခြေစိုက် ခလရ ၇၄ ၊ မရမ်းအခြေစိုက် ခလရ ၂၆၀ စတဲ့ အစိုးရတပ်ရင်းတွေ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ကတည်းကဖြစ်ပြီး ၂ ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးတာတွေတော့ အခုထိအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ သူကပြောပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲတွေမှာ ဦးစခုံတိန့်ယိမ်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်သူ့စစ်အင်အား အများအပြားပါဝင်တယ်လို့ ဗိုလ်မှုးကြီးဇော်တောင်က ပြောပါတယ်။
“ဦးစခုံတိန့်ယိမ်းလဲ ပြည်သူ့စစ်တပ်တွေဖွဲ့ပြီးမှ ပြန်တိုက်ခိုင်းနေတာ၊ သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွါးအတွက်ပေါ့၊ သူက အဲဒီဘက်မှာ ဟိုးဘုတ်တိုင် ၇ အထက်နားလောက်မှာ သတ္တုမိုင်းတစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒီမှာသူ့အကျိုးကျေးဇူးက တော်တော်ရတာကိုး၊ ဒါကြောင့် အဲဒါကို အေးအေးဆေးဆေး လုပ်စားနိုင်အောင်ဆိုပြီးမှ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ပြီးမှ တိုက်ခိုင်းနေတာ၊ အဲဒီမှာရှိတဲ့ လီဆူးတွေရော လဝေါ်တို့ လချိတ်တို့ အားလုံးကိုစုပြီးမှ ဆိုရင်တော့ လေးငါးခြောက်ရာတော့ ရှိမယ်ထင်တယ်၊ တချို့ရည်မှန်းချက်ကတော့ သူတို့ ဒီလူကြားကောင်းအောင် ပြောတာတော့ ချီဖွေနဲ့ လောခေါင်ဆော့လော အဲဒီအကြောက သူတို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို သူတို့ပြန်ပြီးမှ စိုးမိုးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလဲပါတယ်”
ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA က ဦးစခုံတိန့်ယိမ်းကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဖုန်းအခက်အခဲကြောင့် ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး။ ဦးစခုံတိန့်ယိမ်းဟာ ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် ကချင် NDAK အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖို့ အစိုးရနဲ့ သဘောတူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
နော်ခမ်း နဲ့အပေါင်းအပါ ၃ ဦးကို သေဒဏ်စီရင်လိုက်ပီ
Mar 1, 2013 8:08am
ရှမ်းလူမျိူး မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်း နဲ့အပေါင်းအပါ ၃ ဦးကို တရုတ်အစိုးရက ဒီကနေ့ နေ့ခင်းမှာ သေဒဏ်စီရင်လိုက်ပီဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်မလာ ရဲသည့် ရွာသူရွာသားများအတွက်“ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်း မပြုပါ” ဟူသော နှုတ်ကတိ သေချာရေရာခြင်းမရှိ
၂၈၊၂၊၂၀၁၃နေ့က ရွှေည၀ါဆရာတော်ဘုရားကြီး၏မေတ္တာရပ်ခံ၊ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် ပလောင်ရွာထဲရှိ မိမိတို့နေအိမ်များသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြသော တောင်သူလယ်သမားများ၊ မိသားစုများနှင့် စည်းဝေးတိုင်ပင်ပွဲကို
ပလောင်ရွာကန်ဘောင်အနီး၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၂၆၊၂၊၂၀၁၃နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်
မိမိတို့နေအိမ်များသို့ ပြန်မလာ ရဲသည့် ရွာသူရွာသားများအတွက် ရွှေည၀ါဆရာတော်ဘုရားကြီးက မြို့နယ်နှင့်ခရိုင်မှ
သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများ၊လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ရာ “ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်း မပြုပါ”
ဟူသောကတိကို ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် နှုတ်ကတိဆိုသည်မှာ သေချာရေရာခြင်းမရှိ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရက
မီဒီယာများ၊သတင်းစာ များမှတစ်ဆင့် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအနေဖြင့် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာရမှုများ၊ရပိုင် ခွင့်များကို တရားနည်းလမ်းတကျ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
ရှေ့နေကြီးဦးမြင့်သောင်းက ဥပဒေရေးရာအရ အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးစဉ် …. ။
Sann Win's photo.
မြန်မာနိုင်ငံသားမို့ရုပ်အလောင်း မလို-အရှင်လတ်လတ် ပေးပို့ ရန်
တရုပ်နိုင်ငံကူမင်းပြည်နယ် လူထုတရားရုံးတခုက မြန်မာနိုင်ငံသား
စိုင်းနော်ခမ်းကို အပေါင်းပါ-၃-ဦးနဲ့ အတူ မတ်လ-၁-ရက်နေ့ မှာ
ဆေးထိုးသတ်မည်ဖြစ်သည် ။ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ရုပ်အလောင်းကို
မြန်မာစစ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ပေးပို့ မည်ဟု သတင်းများမှာ
ဖေါ်ပြနေကြပါပြီ ။ ဤအချက်နှစ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သော
ကျွန်တော်သည် လက်မခံ။ သို့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ အနေဖြင့်
လက်သင့်မခံသင့် ။ ထို့ ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ သည် မြန်မာအစိုးရကို
မေတ္တာရပ်ခံရပေတော့မည်ဖြစ်သည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်
မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကို ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုအရ ဆေးထိုးသတ်ပြီး
အလောင်းကိုပြန်ပို့ မည်ဆိုခြင်းမှာ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို
လုံးဝပျက်ပြားစေနိုင်သောအချက်ဖြစ်သည် ။ မည်သည့်နိုင်ငံမဆို သူ၏
နိုင်ငံသားတဦးကို အခြားနိုင်ငံတခုခုမှ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တွေ
့ရှိသည့်တိုင်အောင် သူ၏မိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပေးပို့ ရသည် ။
သံခင်းတမန်ခင်းအရ ၄င်းပြသနာကို အကျဉ်းသားဖလှယ်ခြင်း ၊ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း
နှင့် အမည်ပျက်သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခြင်းစသည့်
အချက်အလက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံသည် မည်သည့်အကြိမ်ကမျှ အခြားနိုင်ငံသားတဦးဦးကို
သေဒဏ်ပေးခြင်း၊ ဆေးထိုးသတ်ခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ ခြင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာ
မရှိခဲ့ ဟု ထင်သည် ။ အခြားသူများက လေ့လာတွေ့ ရှိသည်ဟု ဆိုလျှင်လည်း
ကျွန်တော့်အား အပြစ်တင် ပြောဆိုနိုင်သည် ။ ကျွန်တော်ကမူ
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို မတွေ့ ဖူးသေးချေ ။ ၁၉၄၇-ခုနှစ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လုပ်ကြံခံရစဉ်က ဂဋ္ဌုန်ဦးစောကို
လက်နက်ထုတ်ပေးသူများ ရှိသည် ။ လုပ်ကြံရန် လက်ထောက်ချသူများ ရှိသည်ဟု
သမိုင်းမှာ အတိအလင်း ရှိနေဆဲဖြစ်သည် ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို
မည်သူသတ်သနည်း ဆိုသည်မှာ ဂဋ္ဌုန်ဦးစောကိုချည်း လက်ညိုးထိုး၍ မပြည့်စုံဟု
ထင်သည် ။ အကယ်၍ ဗြိတိသျှအစိုးရကသာ တိကျစွာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို
လုပ်ကြံသူများမှာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကလည်း ကြံရာပါ ပူးပေါင်းပါဝင်သည်ဟု
ဆိုလျှင် မည်သို့ ဖြစ်လာမည်နည်း ။ ဂဋ္ဌုန်ဦးစောတို့ ကို ကြိုးဒဏ်ပေးရာ၌
မျက်နှာဖြူ အင်္ဂလိပ်အရာရှိတို့ပါဝင်ပေလိမ့်မည်ဖြစ်သည် ။ သို့ သော်
၄င်းအချိန်က ဗြိတိသျှအစိုးရသည် ဂဋ္ဌုန်ဦးစောတို့ အဖွဲ့ ကိုသာကြိုးဒဏ်ပေးခဲ
့ကြသည် ။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တဦးတလေမျှ မပါဝင်ခဲ့ ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားကို ကြိုးဒဏ်ပေးခြင်း မရှိသော
အခြားထူးခြားသော အချက်အလက်တခုမှာ တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရ၏
ဖိတ်ကြားချက်အရ ချစ်ကြည်ရေးခရီးအဖြစ် ရောက်ရှိလာသော တောင်ကိုးရီးယား
သမ္မတအပါအ၀င် အဖွဲ့ ဝင်များကို မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံမှ ကွန်မွန်ဒို
စစ်ဗိုလ်များက လုပ်ကြံခြင်းဖြစ်သည် ။ လုပ်ကြံသောနေရာကား
အာဇါနည်ကုန်းဖြစ်သည် ။ အာဇါနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့ ၏ အုဋ္ဌ်ဂူများ
-အမိုးများ-ဥပစာနေရာများသည် ဗုံးခွဲ လုပ်ကြံသောကြောင့်
အားလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ ရသည် ။ မြောက်ကိုးရီးယားမှ လုပ်ကြံသော
စစ်ဗိုလ်များသည် ဖမ်းဆီးခံထိသော်လည်း သေဒဏ်အဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ကို မခံစားရခဲ့ 
။ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ တသက်တကျွန်း ကျခံခဲ့ ရသည် ။
တော်လှန်ရေးကောင်စီမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းသည် မြောက်ကိုးရီးယားမှ
ပြစ်မှူကျူးလွန်သူများကို မည်သို့ မျှ ဆေးထိုးမသတ်ခဲ့ ။ ကောင်းမွန်စွာ
ထောင်ထဲမှာ ကျွေးမွေးထားပေးခဲ့ သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံသား စိုင်းနော်ခမ်းသည် ခွန်ဆာကဲ့ သို့ ၎င်း
-လော်စစ်ဟန်ကဲ့ သို့ သော၎င်း ပြစ်မှုများ ကြီးမားသူမဟုတ် ။ သူတို့ ကို
အမေရိကပြည်ထောင်စုအစိုးရမှပင် မူးယစ်ရာဇါများအဖြစ် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီကာ
အလိုရှိသူများအဖြစ် ကြော်ငြာခဲ့ ရသေးသည် ။ သို့ သော် သူတို့ မှာ -၁၉၈၈-
ခုနှစ်အလွန် စစ်အစိုးရ၏ မစမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အလှူရှင်ဒါယာကာ
နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့ သော တကယ့်ခရိုနီများ ဖြစ်သည် ။မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကိုမျှ
အမေရိကရော ထိုင်းနိုင်ငံရော တရုပ်နိုင်ငံကရော ပေးလိုသည်ဟု အတွန့် မတက်ခဲ
့ကြ။ ယခုစိုင်းနော်ခမ်းသည် ၄င်းတို့ နှင့်စာလျှင် အလွန်တရာမှ
သေးငယ်လွန်းလှသော မူးယစ်ရာဇါလေးသာဖြစ်သည် ။
စိုင်းနော်ခမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦး၏
အခွင့်အရေးကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည် ။
ပြည်ပနိုင်ငံတွင် ဆေးထိုးသတ်ခြင်းခံရမည့် စိုင်းနော်ခမ်းအား
မြန်မာအစိုးရသည် မိမိနိုင်ငံသားတဦးအပေါ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသင့်သည် ။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် မဲခေါင်မြစ်တွင်းတွင် တရုပ်နိုင်ငံသား
သဘောင်္သား-၁၃-ဦးကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၌ ပါဝင်သည်ဆိုကာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းမှာ
တရားဥပဒေအရ သူ့ မှာ ပြစ်ဒဏ်ခံစားရသည်မှာ လွန်လွန်းလှသည် ။ ၄င်းအမှုမှာ
သူကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ အခြားသူများသာ ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည် ။
အကယ်၍ မူးယစ်ရာဇါတဦးအဖြစ် ပြစ်ဒဏ်များကို ကျခံစေသည်ဟု ဆိုသော်လည်း
ယခုလို လူမဆန်သော ရက်စက်မှုဖြင့် သွေးအေးအေးနှင့် ပြစ်ဒဏ်မျိုး
မစီရင်သင့်ဟု မြင်သည် ။
မြန်မာအစိုးရသည် တရုပ်နိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို မဝေဖန်ရဲဟု
ဆိုသော်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံသားတဦးအတွက် တောင်းဆိုရန်
အခွင့်အရေးတရပ်ရှိနေသေးသည် ။ ဤသည်မှာ စိုင်းနော်ခမ်းသည် အခြားသော
မူးယစ်ရာဇါများကဲ့ သို့မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်အား နှောင့်ယှက်တော်လှန်နေခဲ
့ခြင်းများလည်း ရေရေရာရာ ရှိလှသည်ဟု မကြားမိချေ ။ သူ့ ကို ရှိနေပါခဲ
့သည်ဟု ပြောသည့်တောင်မှ သူပါဝင်ပါတ်သက်ခဲ့ သော ၄င်းဖြစ်ရပ်တို့ မှာ
ယခုမြန်မာအစိုးရနှင့် ထိတွေ့ နေသော သူတို့ လောက် ဘာမျှ ပြောစရာမရှိချေ ။
ရှမ်းလူမျိုးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးဖြစ်သူ စိုင်းနော်ခမ်းကို
မြန်မာအစိုးရသည် လွယ်လင့်တကူ ဆေးထိုးသတ်ရန် လက်လွပ်စပယ် မနေသင့် ။
ဥပေက္ခာမပြုသင့်ဟု ကျွန်တော်မြင်သည် ။ တရုပ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသား
ရှမ်းလူမျိုး စိုင်းနော်ခမ်းကို ဆေးထိုးသတ်ပြီး အလောင်းကို
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ မည်ဆိုခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအား မလေးစားသော
သဘောကို သက်ရောက်စေခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောင့် ကြွင်းကျန်ရစ်သော
ရုပ်အလောင်းကို မလိုဘဲ အရှင်လပ်လပ် မြန်မာနိုင်ငံအား ပြန်ပို့ ပေးရန်
မြန်မာအစိုးရက တောင်းဆိုရန်လိုသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်၍
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရသာ ကျခံပေးမည်ဆိုခြင်းဖြင့်
နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို တည်ဆောက်သင့်သည်ဟု မြင်ပါသည် ။